PDF Ithuluzi Lokulungisa. PDF Ukubuyisela Isoftware. Lungisa PDF Ifayela.
DataNumen PDF Repair is best PDF ithuluzi lokutakula emhlabeni. Ingalungisa i-Acrobat eyonakele noma eyonakele PDF amafayela bese uthola idatha yakho eningi ngangokunokwenzeka, ngaleyo ndlela unciphise ukulahleka kokonakala kwefayela.
U-downloader mahhalaI-100% Iphephile
Thenga ManjeIsiqinisekiso Sokweneliseka se-100%
4.90 / 5 (kusuka kumavoti angu-1,637)
Kungani DataNumen PDF Repair?
# 1 Ukubuyiselwa
Iminyaka engu-20+ ye
Isixhumanisi Esilula Kakhulu
Izici eziyinhloko ku DataNumen PDF Repair v3.0
Ukusekelwa kweWindows 95/98 / ME / NT / 2000 / XP / Visa / 7/8 / 8.1 / 10 neWindows Server 2003/2008/2012/2016/2019.
Ukusekela ukubuyisa zonke izinhlobo ze-Acrobat PDF amafayela.
Ukusekela ukubuyisa amakhasi kanye nezithombe ezithombeni ze- PDF imibhalo.
Ukusekela ukulungisa okuhlukile PDF amaphutha wefomethi yefayela.
Ukusekela ukulungisa PDF amafayela angahambisani nefayili le- PDF ukucaciswa.
Ukusekela ukulungisa PDF amafayela kwimidiya eyonakele, njengamadiski e-floppy, Zip amadiski, ama-CDROM, njll.
Ukusekela ukulungisa iqoqo le- PDF amafayela.
Ukusekela ukuthola nokukhetha ifayela le- PDF amafayela azolungiswa kukhompyutha yendawo.
Sekela ukuhlanganiswa neWindows Explorer, ukuze ukwazi ukulungisa i-Acrobat PDF ifayela elinemenyu yokuqukethwe ye-Windows Explorer kalula.
Ukusekela ukuhudula nokudonsa ukusebenza.
Amapharamitha womugqa wokusekela (i-DOS prompt).
Ingasetshenziswa njengethuluzi le-forensic lekhompyutha nokutholakala kwe-elekthronikhi (noma ithuluzi le-e-discovery, eDiscovery).
Ukusebenzisa DataNumen PDF Repair Ukubuyisela Konakele Noma Konakele PDF Amafayela
Bona okokufundisa kwevidiyo (Okugcwele)
Bona okokufundisa kwevidiyo (Uhlobo lwedemo)
Lapho i-Acrobat yakho PDF amafayela alimele noma akhohlakele futhi awukwazi ukuwavula ngokujwayelekile, ungasebenzisa DataNumen PDF Repair ukuskena PDF amafayela bese uthola idatha kusuka kumafayela ngangokunokwenzeka.
Qaphela: Ngaphambi kokuthola noma yikuphi okonakele noma okonakele PDF ifayela nge DataNumen PDF Repair, sicela uvale i-Acrobat Reader kanye nezinye izinhlelo zokusebenza ezingafinyelela kufayela le- PDF Ifayela.
Khetha okonakele noma okonakele PDF ifayela elizolungiswa:
Ungafaka i PDF igama lefayela ngqo noma chofoza
ukuphequlula bese ukhetha ifayela. Ungase futhi uchofoze ifayela le-
ukuthola inkinobho PDF ifayela elizolungiswa kukhompyutha yendawo.
Ngephutha, DataNumen PDF Repair izogcina okungaguquki PDF fayela kufayela elisha elibizwa nge-xxxx_fixed.pdf, lapho i-xxxx igama lomthombo PDF ifayela. Isibonelo, komthombo PDF ifayela Lonakele.pdf, igama elizenzakalelayo lefayela elihleliwe lizolimala_fixed.pdf. Uma ufuna ukusebenzisa elinye igama, sicela ukhethe noma usethe ngokufanele:
Ungafaka igama lefayela elihleliwe ngqo noma uchofoze ifayela le-
ukuphequlula bese ukhetha ifayela elilungisiwe.
inkinobho, futhi DataNumen PDF Repair intando start ukuskena nokulungisa umthombo PDF ifayela. Ibha yenqubekela phambili
izokhombisa inqubekelaphambili yokulungisa.
Ngemuva kwenqubo yokulungisa, uma ngabe umthombo PDF ifayela lingalungiswa ngempumelelo, uzobona ibhokisi lomlayezo kanjena:
Manje usungavula i-fix PDF ifayela nge-Acrobat Reader noma enye PDF izinhlelo zokusebenza ezihambisanayo.
Sekela izilimi eziningi ku-GUI.
Ukusekela iSpanishi, isiFulentshi, isiJalimane, isiNtaliyane, isiPutukezi, isiRashiya, isiJapane, isiKorea kanye nesiShayina Esenziwe Lula.
Lungisa ezinye izimbungulu ezincane.
DataNumen PDF Repair 2.6 ikhishwa ngoDisemba 21, 2020
Hlola ngokuzenzakalela izibuyekezo zomkhiqizo.
Thuthukisa ngokuzenzakalela enguqulweni yakamuva.
DataNumen PDF Repair 2.4 ikhishwa ngoNovemba 6, 2020
Thuthukisa izinga lokutakula.
DataNumen PDF Repair 2.3 ikhishwa ngoNovemba 11, 2019
Yenza kabusha injini yokulungisa iqoqo.
Ukusekela ukugcina ilogi yokulungisa i-batch.
DataNumen PDF Repair 2.1 ikhishwe ngo-Agasti 31, 2013
Ukusekela iWindows 7 no-8.
DataNumen PDF Repair 2.0 ikhishwe ngoMashi 16, 2009
Phinda ubhale injini yokulungisa.
Dizayina kabusha i-GUI.
DataNumen PDF Repair 1.0 ikhishwe ngo-Agasti 4, 2005
Ithuluzi elinamandla lokuthola i-Acrobat ekhohlakele PDF amafayela.
Lungisa futhi ubuyise imibhalo ekhohlakele ye-Microsoft Word (.doc kanye .docx).